सेनाको मेडिकल कलेजबाटै एमबीबीएसका विद्यार्थी गायब
October 31, 2021 October 31, 2021 N88LeaveaComment on सेनाको मेडिकल कलेजबाटै एमबीबीएसका विद्यार्थी गायब
काठमाडौं । नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन् । काठमाडौंको सानोभर्‍यास्थित सेनाको मेडिकल कलेजबाट राजेश शाही नाम गरेका विद्यार्थी भदौ १७ गतेदेखि बेपत्ता भएका हुन् । सुर्खेत जिल्ला स्थायी घर भएका राजेश बेपत्ता भए पनि खोजी कार्यमा सेना र नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेको आफन्तको आरोप छ । राजेशका दाई […]
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ८ सयभन्दा धेरैका लागि रोजगारी खुल्यो
October 31, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ८ सयभन्दा धेरैका लागि रोजगारी खुल्यो
काठमाडौं। लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लागि आठ सयभन्दा बढी संख्यामा आवेदन खुलाएको छ। आयोगले वरिष्ठ प्रबन्धकसहित विभिन्न पदमा आठ सय ३५ जना माग गर्दै आज आवेदन खुला गरेको हो । अनलाइन आवेदन सोमबारदेखि भर्न सकिन्छ । २ जना वरिष्ठ प्रबन्धक, ८ जना प्रबन्धक र १८ जना उपप्रबन्धकलगायत विभिन्न पदमा गरी कूल आठ सय […]
भीम रावलले खाेले कार्यदलबाट राजीनामा दिनुकाे कारण !
October 31, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावलले खाेले कार्यदलबाट राजीनामा दिनुकाे कारण !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमालेमा उत्पन्न अन्तरविरोध र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ १० बुँदे सहमति भएपनि पार्टीका अध्यक्ष केपाी शर्मा ओली आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेकाले आफुले कार्यदलबाट राजीनामादिएको बताएका छन् । कार्यदल गठन हुँदा संयोजक नतोकिए पनि यसबारे स्थायी कमिटीमा कुरा उठाएपछि आफू संयोजकमा रहने निर्णय पछि मात्र भएको पनि भीम रावलले […]
एमाले महाधिवेसनका लागि १२ वटा समिति गठन, यी हुन् संयोजक
October 30, 2021 N88LeaveaComment on एमाले महाधिवेसनका लागि १२ वटा समिति गठन, यी हुन् संयोजक
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी १० औं राष्ट्रिय महाधिवेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न १२ वटा समितिहरु बनाउने निर्णय गरेको छ । महाधिवेसन मूल व्यवस्थापन समितिको आज च्यासलमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । संयोजक रामबहादुर थापा (बादल)को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति, प्रचारप्रसार समिति, अतिथि सत्कार समिति, खाद्य व्यवस्थापन समिति, स्वयमसेवक परिचालन गठन […]
प्रकाश र मीनालाई ‘दोहोरी च्याम्पियन’को उपाधि
October 30, 2021 N88LeaveaComment on प्रकाश र मीनालाई ‘दोहोरी च्याम्पियन’को उपाधि
काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुती रहेको लोकदोहोरो कार्यक्रम ‘दोहोरी च्याम्पियन’को उपाधि प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकीको समूहले जितेको छ । शनिबार साँझ पोखरामा भएको फिनालेमा बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीको समूहलाई पछि पार्दै प्रकाश र मीनाको समूहले उपाधि हात पारेको हो । बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीको समूहले दोस्रो स्थान हात पारेको छ । उपाधिसँगै […]
‘मेरो किरिया कसैले नगर्नु, तिर्न रहेको बाँकी रकम श्रीमतीसंग लिनु’
October 30, 2021 N88LeaveaComment on ‘मेरो किरिया कसैले नगर्नु, तिर्न रहेको बाँकी रकम श्रीमतीसंग लिनु’
पाेखरा । पत्रकारितासँग जोडिएका पोखराका श्रीप्रसाद बाँस्तोलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘सु’सा’इट नो’ट’ राखेर देहत्या’ग गरेका छन्। बालमैत्री मिडियाका प्रकाशक, पोखरा टेलिभिजनका पूर्व सिइओ, शुभलाभ एडभरटाइजिङ एजेन्सीका सिइओसमेत रहेका उनी बाल अधिकार नेपालका अध्यक्ष, शिशु विकास तथा स्याहार केन्द्रका सदस्य पनि हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक सुवास हमालका अनुसार बाँस्तोलाले शुक्रवार […]
October 30, 2021 N88LeaveaComment on बहिनीलाई बिएससी नर्सिङ पढाउने पठाओ राइडर सुनिलको सपना खोस्यो टिपरले
काठमाडाैं । सुनिलप्रसाद महतो दिनभरि मोटरसाइकल वर्कसपमा काम गरेर बुधबार साँझ आफ्नो डेरा फर्केका थिए। कलंकीस्थित उनी काम गर्ने वर्कसपबाट डेरा नजिकै थियो। उनी पुग्दा कान्छी बहिनीले कोठामा खाना पकाइसकेकी थिइन्। हत्तपत्त खाना खाएर उनी मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर निस्किइहाले। पर्सा, जगरनाथपुर गाउँपालिका-४ घर भएका २५ वर्षीय महतो दिनभर वर्कसप र रातको समय पठाओ राइडरको काम […]
कांग्रेस बुढो भयो, एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन -ओली
October 30, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेस बुढो भयो, एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन -ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको मिति सारिरहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसप्रति कटाक्ष व्यक्त गरेका छन् । शनिबार सिन्धुपाल्चोक-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन गर्न नसक्ने गरी कांग्रेस बुढो भएको बताएका हुन् । ‘कांग्रेस महाधिवेशनको आयोजना गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । पाँच वर्षमा महाधिवेशनमा गर्न सकेन । अहिले […]
एमाले अध्यक्ष ओलीको एउटै जवाफले भीम रावलको बोल्ति बन्द !
October 30, 2021 N88LeaveaComment on एमाले अध्यक्ष ओलीको एउटै जवाफले भीम रावलको बोल्ति बन्द !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलबीच केन्द्रीय कमिटी बैठैकमा झोका झोक चलेको छ । दश बुँदे कार्यान्वयन नभएको र आफूलाई एक्लो बनाएको भन्दै भीम रावल बम्किन थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलेबीचमै हस्तक्षेप गरेका थिए । सारै कम मात्रै रिसाउँने ओलीले आज भने रातोमुख लगाएर रावललाई झपारेको एक केन्दीय […]
यौ’न का’ण्डमा फ’साउन खोजेको भन्दै बास्तोलाद्वा’रा आ’त्म’ह’त्या
October 30, 2021 N88LeaveaComment on यौ’न का’ण्डमा फ’साउन खोजेको भन्दै बास्तोलाद्वा’रा आ’त्म’ह’त्या
पाेखरा । पत्रकार तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय पोखराका श्रीप्रसाद बास्तोलाले आफ्नै घरमा आ’त्म’ह’त्या गरेका छन् । महानगरपालिका ११ फुलवारीका बाँस्तोलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेर घरभित्रै झु”न्डिएर आ’त्म’ह’त्या गरेका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन् :‘१५ वर्ष अगाडि आमाले भनेको नमान्दाको परिणाम पैतृक सम्पत्ति, घर, खेत, जग्गा, सुन, गहना र स्कुल सबै चैट, आज आफैँ पनि […]